NepalManch :: निधिले सभापतिका लागि अघि सारेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)
निधिले सभापतिका लागि अघि सारेको घोषणापत्रमा के छ ? (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । कांग्रेस उप–सभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा अघि बढ्न घोषणापत्र अघि सारेका छन् ।
५३ वर्ष सक्रियतापूर्वक राजनीति गरेको भन्दै परिवर्तितक राजनीतिक प्रणालीको व्यवहारिक पक्षहरूलाई सार्थक पार्न आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थ्ति सम्पर्क कार्यालयबाट निधिले सभापतिमा अघि बढ्न घोषणापत्र अघि सारेका हुन् ।
यस्ताे छ निधिकाे घाेषणापत्र